Talo-soo-jeedin Dubai Woman Expat
Gabadh qurbaha joogta oo Dubai ah waxaan ku shaqaaleysiinaynaa UAE. Dumar ma tahay? Miyaad raadineysaa inaad shaqo ka hesho Dubai iyadoo naag ah Emirates?. Waxaan siineynaa hage qoto dheer haweenka qurbaha ku nool. Waxaan caawimaad u fidineynaa haweenka shaqo doonka ah ee UAE. Si aan u tilmaanno waan sameyn doonnaa ayaa kuu tilmaamaya sida loo helo boosaska banaan. Xaaladahaas oo kale, waxay dalbanayaan shaqooyin iyo waraysiyo laga qaadaa Dubai oo ah haweeney u dhalatay Dubai.
Waqtiga dheer, Haddii aad tahay qof dumar ah oo ku nool Dubai. Isla markaasna raadinta xirfad. Waxaan nahay halkan si aad uga caawiso inaad shaqo bilowdo UAE. Sidii la ogsoon yahay in haweenka dhooban ay yihiin xirfadlayaal khibrad leh. Kuwa ugu badan ee shaqo doonka ah ee raadinaya inay shaqo helaan. Guud ahaan hadalka, maahan oo keliya ragga iyagoo raadinaya inay u guuraan Imaaraadka Carabta.
Mucaaradka wadamada Khaliijka ayaa hadda la sii daayay shirkadeena. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa CV ama faahfaahin dheeraad ah oo qoran Dubai Job iyo shaqaaleysiinta. Taasi waxay xiriirineysaa wakiilada shaqaaleynta ee dhajinta shaqooyinka maxalliga ah ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Maqaalka Dubai, waxaad ka heli kartaa shaqooyin dhowr ah. Haddii aad tahay gabadh qurbe joog ah oo Dubai ah, eeg muuqaal oo aqri tilmaamahayaga.
Dumarka Expat ee Dubai ayaa wax badan ka ogaanaya xirfadaha
Expat Haweenka Hawsha Dumarka Dubai. Waan maamulnay in la diyaariyo hage ku caawinaya. Ilaa hada, waxaad heli kartaa shaqo iyo dabcan ku habboon baahiyahaaga hormarinta shaqada. Safka hore, Dubai iyo Abu Dhabi waa magaalooyinka ugu wanaagsan ee UAE. Xarunta dhexe ee meelaynta shaqaaleynta UAE. Dubai iyo Abu Dhabi way badan yihiin fursado shaqo oo dadka reer Indiya u dhoofi karaan.
Waqtigan xaadirka ah, habka shaqaalaysiinta ayaa ka duwan Yurub. Dhamaan si lama filaan ah laakiin wadamada reer galbeedka ma fahmaan wax walba. Shaqaaleye kasta waxay ka dhigaysaa shaqo raadintaada mid aad u sahlan. Shirkaddayada xilligan iyagoo gacan ka geysanaya shaqo kasta oo shaqo doon ah oo ka socda Dubai. Waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawinno inaad noqoto shaqaale ka shaqeeya Expatwoman Dubai oo jooga UAE.
Ujeedada shaqo raadinta. Kooxda qorista shirkadda ee magaalada marwalba waxay tiraahdaa. Waxa ugu muhiimsan Qoritaanka Dubai inaad xasuusato. Markaad raadineyso fursado shaqo Dubai. Hubi inaad iibisid khibradaaga shakhsiyadeed ee loo-shaqeeyaha. Guud ahaan markaad gaarto wareysiga. Waa inaad samee naftaada musharax qiimo leh suuqa Bariga Dhexe. Inta badan, waa inaad noqotaa qof muhiim ah. Iyo qiimo dheeri ah shirkadda cusub.
Ma aha kaliya Dubai iyo Abu Dhabi. Haweeneyda ajnabiga ah waxay sidoo kale shaqo ka heli kartaa Qatar. Helitaanka Job in Qatar ma fududa. Sidaa darteed waa muhiim soo dhaweynta si aad shaqo uga hesho Dubai. Waa inay aad uga fiicnaato sidaad u malaynayso. Mustaqbalka, nasiibkaaga maalin kasta waxay kuxirantahay. Nooca shaqada aad u qalanto shaqo cryptocurrency in laga sameeyo Qatar.
Shirkadaha Qatar oo raadinaya shaqaalaha haweenka ah. Xaaladahaas oo kale, shirkado badan oo raadsanaya dumar dumar ah. Qaar ka mid ah qaybta shaqada ayaa dumarka si fiican u qaban kara. Tusaale ahaan dukaamada dahabiga ah ee ku yaal bartamaha magaalada wax ka iibsashada. Ku dhawaad ​​maalin kasta raadinta wakiilada iibka dumarka. Xirfaddan ayaa caan ka ah Qatar haweeney dibedda ah. Dhinaca kale, leeyihiin fiiri boggaga internetka ee loo shaqeeyaha.
Tani waa kan koowaad Waxyaabaha ay tahay inaad raadiso markaad shaqo raadineyso maaddaama jagooyinka laga heli karo ay ku yaalliin halkan sidoo kale shuruudaha iyo habraaca codsashada. Shabakadaha shirkadaha ee Qatar ayaa ku caawin kara. Tani waxay hagaajinaysaa raadintaada iyo waxay yareysaa halista khiyaanooyinka shaqada. Waxa kale oo aad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan shaqada iyo xiriirka shirkadaha si toos ah ugu qoran boggaga Dawladda.
Ku noqo haweeney aadna u raadsato shaqooyinka Doha
Shaqooyinka ku yaala Doha waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican haweenka raga ah. Guud ahaan, waxaad ka heli kartaa dalab iyo shaqo ku yaal Doha City. Xagga sare oo dhan Gacanka Gacanka wuxuu u furan yahay haweeney cusub. Sanado badan Shirkadda Dubai City Company. Dhab ahaantii, waxay caawisay haweenka xirfadlayaasha ah. Ujeedkeenu waa inuu kugu meeleeyo shaqooyin wanaagsan Mumbai ee Doha, Qatar ee Bariga Dhexe.
Ujeedada shaqo raadinta Doha. U fiirso hayadaha ugu weyn ee internetka gudaha Qadar. Dooxa waa magaalada ugu weyn ee Qadar. Iyo meesha kaliya ee aad shaqo ka raadin karto haweeney ahaan. Magaalada Doha, waad awoodaa la xiriir boqolaal loo shaqeeye. Dhanka kale, shirkaddayadu way ku caawin kartaa.
Ujeeddadan Shirkadda Dubai City waxay siisaa musharraxiinta hannaan shaqo qoris oo dhammaystiran. Waxaan gacan ka geysaneynaa inaan dumarka ugu wareejinno Magaalada Doha. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino in lagugu meeleeyo Qatar. Laakiin sidoo kale raadso bannaanbaxyo kale Bariga Dhexe sida shisheeye. Shirkadeena, waad sameyn kartaa oo waxaad noqon kartaa Expatwoman Dubai dibad bax.
Adeegso adeeggayaga shaqaalaynta ee onlaynka ah. Lagu meeleeyo Qadar magaalada Doha. Shirkaddayada shaqaalaysiinta waxay siisaa fursado shaqo. Waxaan had iyo jeer isku dayeynaa inaan caawinno dumarka shaqo doonka ah. Sababtaas awgeed, annagu isku dayaya inaad shaqo ka hesho goobta saxda ah ee MBA. Sababtoo ah Qatar waa mid aad u qiimo badan si loo helo waxbarasho wanaagsan.
Shaqooyinka dhoofka ah ee Dubai iyo Bahrain
Dhanka kale, haddii aad shaqo raadinayso. Tixgeli Baxrayn xagga baaristaada. Dabcan marka lagu daro raadinta shaqooyinka Imaaraatka. Naag kasta waxay shaqo ka heli kartaa Baxrayn. Salkaas, a haweenka uurka leh waxay heli karaan shaqo ee Bahrain.
Waad arki kartaa goobaha shaqada ee degmada. Intaa waxaa dheer, u dir dalabkaaga Bayt ama yaxaas. Sidoo kale, fiiri shaqooyinka Safaaradda Baxreyn. In kasta oo ay tani run noqon karto raadinta shaqooyinka UAE iyo Emirates. Waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn markaa tixgeli Baxrayn. Si aad u hesho xirfad ku habboon Baxrayn goobta shaqada ee Aljazeera ama goobo kale oo shaqo.
Waxaa jira meelo badan oo qurba-joog ah ka heli karaan shaqooyinka UAE. Sida loo helo xirfad ku dhisan Dubai waxay ubaahan tahay jawaab toos ah. Sababtoo ah markay soo booqdaan raadinta shaqooyinka Imaaraadka. Waxay u baahan yihiin inay helaan macluumaad faahfaahsan. Tusaale ahaan Dhiirigelinta shaqo raadinta Dubai iyo siyaabaha suuqgeynta.
Dubai Shaqooyinka iyo Isgaadhsiinta
Shabakad Haweeney ah. Dhamaanteen waan ognahay haweenka. Dhammaantood way qaateen. Mar kasta oo aad qof kale kula kulanto qof dumar ah. Waxaad u baahan tahay si aad u bilowdo shabakad. Wax kasta oo aad samaynayso ma jirto. Bilow sameynta shabakad ajaaniib ah. Eeg cidda aad taqaano. Oo calaamadeeyn kara qofka kaa caawinaada inaad kiraysato.
Hubso inaad la hadal naago kale oo dumar ah. Isku day inaad marwalba fiiriso banaanka sanduuqa. Dhanka kale, eeg meeriskaaga meheradda. Saaxiibkaaga kuugu dhow wuxuu keeni karaa qiime. Goorma raadinta boos cusub oo ku yaal Gacanka. Dhanka kale, qof aad horey u ogtahay. Dhab ahaantii waxay noqon kartaa a caawimaad cajiib ah markaad shaqo raadineyso.
Qofka ugufiican ee aad ka taqaanid noloshaada xirfadeed. Waxay noqon kartaa mid qiimo ku leh raadinta shaqada. Sidookale, iskuday in la helo qof ka shaqeeya UAE. Shirkadaha qaar waxay shaqaaleeyaan oo keliya caalami ahaan. Marka Isgaadhsiinta LinkedIn xaqiiqda ayaa kaa caawin doonta inaad hesho shaqo.
Sidee u heleysaa shaqo ku jirta UAE sida Haweeney Expat
Dubai oo shaqaaleysiisay Dubai
Waxyaabaha ugu adkaa waa in ay gaaraan qorayaasha. Waa inaad daneyneysaa Shaqooyinka South Africans ee Dubai. Sababtoo ah qaar ka mid ah maareeyayaasha shaqaaleynta ee Koonfur Afrika ayaa shaqaaleysiinaya shaqaale caalami ah. Ayaa kuu heli kara lambarka taleefanka kugu habboon adiga Maamulayaasha shaqaaleynta?. Ama xitaa cinwaanka emaylka ee qofka ku shaqaalayn kara. Sidoo kale heshiis aad u wanaagsan. Si loo ogaado qofka masuulka ka ah qoritaanka. Sidoo kale haddii aad kari karto u gudbi CV-gaaga qofka ay khusayso. Oo eray wanaagsan kuu qoro adiga.
Dubai ayaa hadda shaqo ka heli karta Bariga Dhexe. Shirkadeena ka caawinta balaadhinta sidii shaqooyin loogu heli lahaa shirkadayada. Haddii aad shaqo ka raadinayso Imaaraatka si fudud ayaad u awoodi kartaa u tuur CV-gayada shirkadaha Dubai Airpot. Intaa waxaa sii dheer, waad la xiriiri kartaa shaqo doonka kale waxayna kugu caawin karaan. Xusuusnow in xitaa talooyinka fudud ay badali karaan habka fikirkaaga.
Shirkadda Dubai City waxay hadda samaysay talooyin ku saabsan raridda haweeneyda uurka leh. Tilmaantaan dhameystiran ee loogu talagalay soogalootiga cusub, waa inaad heshaa aragti cad sida loogu meeleeyo Dubai. Shirkaddayadu sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo gaari lahaa yoolalkaas. Shaqada suuq loogu talo galay dumarka qurxiya ee Dubai ayaa koraya.
Wicitaanada qabow ee loo shaqeeyaha ee Dubai
Waa muhiim in la garto in la helo magaca loo shaqeeyaha. Isku day inaad hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirkadan. Intaa waxaa sii dheer, iskuday inaad raadiso lambarada taleefanada ee la xiriira. Markaad u yeeraysid loo shaqeeyaha. Isku day inaad wax ka sheegto khibradaada xun. Intaa waxaa dheer, istaag khibradaada markii aad waceyso loo shaqeeyayaasha Dubai. Markaad wacdid shirkadaha.
Ujeedadaadu waa inaad la hadasho maamulaha shaqaaleynta ee shaqada dibadda. Ka duwanaan kuwa kale ee shaqo doonka ah. Samee saaxiibtinimo maahan in lagu guuleysto. Waa inaad noqotaa xirfadle. Waxa kale oo lagu fiiqaa maamulaha ganacsiga.
Isku day si loola xiriiro maareeyaha HR gudaha shirkadda. Isla mar ahaantaana ha u oggolaan in qofku uu kuu tilmaamo. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, isagoo wacaya maareeyaha shaqaalaysiinta. Waligaa ha noqon hawl fudud oo aad qaban karto. Laakiin dhinaca kale, waxay wax ku ool tahay markaad hadlayso ama dirayso CV. Gaar ahaan qofka aad adigu tahay jeclaan lahaa in uu saameyn ku yeesho. Waxaa lagu xasuustaa marka dhulalka CV-ka ee ku yaala sanduuqa.
Wadahadal fool ka fool ah oo uu la socdo maareeyaha shaqaalaysiinta. Waxay ku siin doontaa fursadda ugu habboon. Guud ahaan lahadal si loo sameeyo garoon iib ah. Iyo riixi rikoodh wanaagsan oo ku saabsan maaraynta shaqaaleynta. Expatwoman Dubai oo fursad fiican u leh inuu shaqeeyo.
Hay'adaha Qorista ee Imaaraadka Carabta
Shirkadaha dhinaca wanaagsan ee Dubai. Iyo shaqaaleynta hayadaha shaqaalaynta. Guud ahaan, qorista haweenka. Hay'adaha shaqaalaynta ee UAE. Raadinta Xirfad caalami ah oo ku saabsan telefoonka gacanta. Si loo helo murashaxiinta ugu aqoonta badan. Iyo 7th Emirates waa meesha ugu wanaagsan waayo.
Naag qurbaha ah oo raadineysa Dubai cajiib ah. Jagooyinka qaar waxay u baahan yihiin oo keliya taabashada dumarka. Guriyaha ama xitaa hoteelka. Dhammaantood way baadi goobayaan oo loogu talagalay haweenka sare ee Dubai. Waxaana halkaan u joognaa inaan ku caawino.
Tusaale ahaan bariga dhexe. Haweenku badanaa waxay noqdaan maamuleyaal. Waxaad u maleyn kartaa inaadan uqalmin dumarka shaqooyin aad u sareyso. Shaqooyinka ay bixiyaan maamulka sare. Iyo jagooyinka fulinta. Hadda waxay caan ku noqdeen Imaaraadka Carabta.
Si aad ah ugu wanaagsan wakaaladda Emirate-ka ee raadinaya musharixiin cusub. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa Expo 2020 Dubai. Suuqa ayaa abuuray liiska murashaxiinta. Gaar ahaan shirkadaha shaqaalaysiinaya ilaa 2020. Xitaa Google ee Dubai ayaa shaqaalaysiinaysa.
Ka digtoonow shaqooyinka banaan ee mushaharka laga qaato oo aad u hooseeya magaalada Dubai. Guud ahaan kahadalka Magaalada Dubai. Lahaanshaha dambi qaraabo super aad u hooseeya. Maaha in la khiyaaneeyo. Waxaad had iyo jeer noqotaa fulin mushahar leh. Shaqooyinka qaar mushaharkoodu waa hooseeya. Tusaale shaqaalaha cusub ee qalin jabiyay. Ma filan karo dakhliga weyn tusaale ahaan shaqooyinka Saudi Arabia. Waa inuu xasuusnaadaa qaar ka mid ah loo shaqeeyayaasha. Ka faa'iidayso dadka. Waa sharci darro wakaaladda shaqaalaysiinta inay ku weydiisato inaad lacag bixiso si aad shaqo uga hesho UAE.
Wakiilada qorista ee haweenka u dhoofaya dumarka
Shaqaalaynta iyo maamuleyaasha shaqaaleynta. Kordhin kara murashax kasta. Shaqadoodu waa inay ku meeleeyaan. Maamulayaasha shaqaaleynta, wax farqi ahi ma jiraan. Haddii aad tahay naag digaag ah ama nin. Shaqaaleysiinta maamulayaasha lacag sameynta musharrax guuleystey. Maamulka shaqaalaysiinta waxaa shaqaaleysiiya shirkadaha ugu fiican. Dhanka kale, shaqsiyaad kuma shaqaaleysan doontid. Kaliya maamulayaasha shirkadaha gudaha shirkadda. Sidoo kale, raadso meel aad ku shaqeysato iyo adeegyada. Iyo inaad la xiriirto maamulayaasha shaqaaleynta ee Dubai.
Waajibaadka ugu weyn loogu talagalay qorayaasha khibrada leh. Guud ahaan hadalka waa in laga iibiyo shirkadda. Inaanu kaa iibin shirkadda. Marka iska hubi inaad taqaanid waxaad sameyn karto marka laga hadlayo suuqgaynta shaqsiyeed. Kuwa badan baa jira siyaabaha loo helo maamulayaasha kireysiga ee Dubai. Dabcan, shaqaaleeyayaashu waxay xiiseynayaan oo keliya kaliya mushaharka ugu sareeya ee waxbarasho.
Sidaa darteed go'aanka ugu xun ee aad sameyn karto. Waa in ay galaan dabinka bixinta komishanka ee shaqada. Tusaale ahaan, shirkadayada ayaa kaa caawin karta inaad shaqo hesho. Laakiin kuuma siin karno fursad shaqo. Waxaan caawinaynaa kaliya inta lagu gudajiro howlaha qoritaanka. Sida ugu fiican ayaa ah in la helo hay'ad shaqo sharci ah oo ku saabsan fursadaha shaqooyinka. In kasta oo ay tani run noqon karto. Xaqiiqdii, markii ay kormeerayaashu dhammeeyaan hawsha codsiga shaqada. Waa in loogu yeeraa wareysi. Ka dib oo dhan shaqo doon kasta maahan shaqo ka helo Dubai. Qaar ka mid ah qurbo-joogga dalka ku soo noqonaya.
Tusaale ahaan dumarka shaqo doonka ah. Inaad dibedda ku noolaato oo aad tilmaanto. Qaar ka mid ah Haweenayda u dhalatay dalka Hindiya waxay sidoo kale ka heshaa shirkadda Dubai City Company. Duruufahaas oo kale, Haddii aad raadineyso inaad noqoto Exat Girl in Dubai. Laakiin hadda, waxaad ku nooshahay dibedda. Waad awoodaa u isticmaal shirkadaheena habka shaqo raadinta.
Diyaarinta wareysiga ee Dubai
Xaqiiqdi, shirkadaha Dubai waa kuwa ugu fiican. Si aad u hesho maamulaha HR inuu dib u eego dalabkaaga shaqo. Dhowr erey ayaa qaadata waqti badan. Gaar ahaan Imaaraadka. Laga yaabee in ka badan bilo 6. Si aad u hesho waayo-aragnimo ku filan wareysiga dhowr warshadood. Waxaad u baahan tahay inaad haysato waayo-aragnimo kugu filan oo ah shaqo hudheel. Dhinaca kale, waxaad u baahan tahay inaad raacdo siyaasadda qorista sida ugu macquulsan.
Isku day inaad sameyso rikoodh wanaagsan oo ku saabsan CV-gaaga. Isla markaa, waxaad ubaahan tahay inaad timaado waraysiga la diyaariyey. Had iyo jeer ka dhigo dareenkaaga koowaad sida ugu fiican ee aad awooddo. Gaar ahaan ee shaqo bangiyeed oo Dubai ku yaal Mid ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad xasuusato. Marka shirkadu ugu dambeyntii waxaan kugu casuumay wareysiga. Xaqiiqdii, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato nuqul cusboonaysiin ah oo Resume-gaaga ah. Marka la eego qodobbadaas, fikradda caqliga leh. Waxay tahay inaad ka keento waraaqaha talobixinta shaqo-bixiyeyaashaadii hore.
Waqti marba mar waxaad u baahan tahay inaad eegto faahfaahintaada shaqooyinka xirfadeysan. Mar walba fiiri CV-gaaga shaqooyinka suuq-geynta. Iyo inaad hubiso in dhammaan dukumintiyada aad soo bandhigeysid loo shaqeeyayaasha. Noqo mid ka mid ah kuwa ugu fiican oo si fiican loo soo bandhigay iyada oo aan jirin qaladaad naxwe ahaaneed. Hubi inaad haysatid dukumiinti kasta oo ku yaal shandad xirfad leh ama fayl madow oo madow. Sababtoo ah u wareegitaanka iyo dukumiintiyadu waxay la socdaan muuqaal xun. Waxay u muuqataa inaad u muuqanayso mid xun oo aanad diyaar u ahayn wareysiga.
Koodhka dharka iyo wareysiga gabadha ku nool Dubai
Isku xidhka sannadaha khibrada leh. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato waxa aad u socoto si ay u xirtaan wareysiga socodka. Dhinaca wanaagsan isku day inaad yareyso heerka walaaca subaxa wareysiga. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato. Dubai in ay tahay magaalo dhaqan carabi ah oo dhawrsan. Dowlada UAE leeyihiin xayiraad adag oo la xiriirta qaabka ay haweenku u labistaan.
The Shaqaalaha Pakistani doonaya ee jooga UAE yaqaan sida looga dhaqmo wadan Muslim ah. Haweeneyda joogta Dubai ee haysata xeerarka lebbiska oo xadidan. Dhanka kale, dumarka reer yurub iyo mareykanka waa Waxaa lagu soo dhaweynayaa inay adeegsadaan labiskooda dhaqanka. Laakiin tan iyo markii aad noqotay deganeyaasha magaalada Dubai. Waad ogaan doontaa sida dhaqanka Carabiga loo yaqaan.
Tusaale ahaan Dubai, waa khalad in la xidho dharka oo la muujiyo. Naagtu waxay u ekaan kartaa sexy ku dhawaad ​​nooc nooc oo ganacsi oo dhan ah. Iyo tani waa mid aad ugu haboon Emirates. Waad arki kartaa sida loo xiro Dubai?.
Xirfadda ugu adag iyo ugu fudud ee dumarka ku nool Dubai
Waxaa sidoo kale jira shaqooyinka ugu adkaa haweeneyda oo u tartamaya. Tusaale ahaan Xirfadda baabuurta ee haweenka ee Dubai. Waa mid aad u xoogan si aad u hesho. Kaliya ha u maleyneysiin inaad dooneyso inaad soo iibsato Porsche cusub. Dadka intooda badan ee ku fekeraya iibka ayaa ku soo laaban doona kuna martiqaadaya. Si kastaba ha noqotee, haddii haweeneydu ku samayso UAE. Waxaa laga yaabaa in laga yaabo inay tahay wax shaki ah, sababtoo ah dhaqanka.
Dhanka kale hawsha ugu fudud ee dumarka. Guud ahaan waa si ay u bilaabaan xirfad ahaan macallin ahaan. Shaqooyinka banaan ee shaqada macallinimadu waxay u furan yihiin haweenka uurka leh. Isku day maalin walba sida haween Hindi ah oo wax dhigta dugsiyada. Iyo inta badan caruurta waxay jecel yihiin. Inta badan dadka ajnabiga ahi way ogyihiin Dubai waa meesha ugu fiican ee shaqaalaha. Sidaa darteed waxaa jira shaqooyin wanaagsan iyo shaqooyin xun oo loogu talagalay dhaqaalaha ku shaqeeya Imaaraadka.
Expatwoman Dubai - Waxaan shaqaaleysiineynaa
Waxaan hadda ka caawinaynaa haweeneyda in ay hesho a Shaqada Dubai
Isku day inaad dib u dirto resume iyo bilaabi a shaqooyinka cusub ee Imaatinka Carabta. Waxaan sidoo kale nahay oo shaqaaleysiinaysa Filipino u dhoofaysa Dubai.
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Maalgashiga Dubai ayaa maanta bilaabaya!